केराटिन के हो र यो के को लागी हो? स्टाइलिश पुरुषहरू
एलिसिया टोमेरो | 04/01/2022 21:00 | व्यक्तिगत हेरचाह, फेसन, कपाल शैली, प्रचलनहरू
केराटिन यो एक प्राकृतिक अघुलनशील प्रोटीन हो यो सौन्दर्य उपचारमा प्रयोग गरिन्छ, विशेष गरी कपालको हेरचाहमा। पछिल्लो समय यो पदार्थ उपचारको लागि परिचित छ कपाल क्यूटिकल पुनर्जन्मकर्ता र उज्ज्वल कपालको आनन्द लिन सक्षम हुन।
सिद्धान्तमा यो प्रोटीन मानव शरीरमा पाइन्छ र विभिन्न जीवहरूमा छाला, नङ, दाँत, कपाल, प्वाँख, सिङ र खुर जस्ता संरचनाहरू बनाउँछन्। यसको निकासी उपचार गर्न आवश्यक भएको छ जहाँ यो छेउछाउ र मर्मत गर्नुपर्ने क्षेत्रहरूमा पोषण गर्दछ।
1 केराटिन भनेको के हो?
2 केराटिनसँग के उपचार गर्न सकिन्छ?
3 सीधा उपचारको लागि केराटिन कसरी प्रयोग गर्ने
4 उपचार पछि हेरचाह
केराटिन भनेको के हो?
यो एक फाइबरयुक्त प्रोटिन हो जुन XNUMX औं शताब्दीमा पहिले नै थाहा थियो र XNUMX औं शताब्दीको सुरुमा यो पहिले नै कपाल, प्वाँख, खुर, सिङ, आदि बाट निकालिएको थियो। प्रयोग र सौन्दर्य उपचारको लागि, दुबै कस्मेटिक, कपडा वा बायोमेडिकल। आज त्यहाँ भेडाको ऊनको एक विशेष निकासी छ जहाँ क पानीमा घुलनशील केराटिन (cynatine®), जुन पूर्णतया कपाल द्वारा अवशोषित हुन्छ र यसको कम्पोनेन्टहरू मानव कपालको संरचनासँग मिल्दोजुल्दो छन्।
केराटिन यो विशेष गरी कपाल पोषण गर्न प्रयोग गरिन्छ, किनकि यसले यसको फाइबरलाई पुनर्संरचना र मर्मत गर्दछ। यो को उपचार मा प्रयोग गरिन्छ कपाल सीधा गर्ने, कपालमा जहाँ फ्रिजलाई संरचित गर्न सकिन्छ र फ्रिज प्रभावलाई रोक्नको लागि, जहाँ यसले यसलाई सीधा गर्दैन तर यसलाई धेरै नरम र अधिक व्यवस्थित छोड्नेछ। यो कपाल सीधा गर्न को लागी एक उपचार होइन, तर यो प्रयोग गरिएको छ भनेर निर्दिष्ट गर्नुपर्छ कपाल को शक्ति र स्वास्थ्य पुनर्स्थापित।
केराटिनसँग के उपचार गर्न सकिन्छ?
सौन्दर्य केन्द्रहरूमा जहाँ कपाल उपचार गरिन्छ हामी समाधान र प्रक्रियाहरू धेरै दिन पाउन सक्छौं कपालमा चमक, सीधा वा बलियो। निस्सन्देह, हामीले अरू कसले यी प्रक्रियाहरूको बारेमा सुनेका छौं हाम्रो वातावरणमा धेरै महिलाहरू छन्, तर हालैका पुरुषहरूले यस प्रकारको हेरचाह गर्न थालेका छन्। तिनीहरू मध्ये हामी हाइलाइट गर्न सक्छौं:
धेरै जीवन शक्ति प्रदान गर्दछ, यसको बलले जरादेखि टुप्पोसम्म कपालमा धेरै जोश ल्याउँछ। हामी चरम उपचारले क्षतिग्रस्त कपालमा उत्कृष्ट नतिजाहरू हेर्न सक्षम हुनेछौं जहाँ हामी हेर्नेछौं कि यसको फाइबर कसरी पुनर्संरचना गरिएको छ।
धेरै चमक सिर्जना गर्नुहोस् यसको प्रक्रियामा, यदि तपाइँको कपालमा केहि सजायको कारणले उज्यालो छैन भने, केराटिनले तुरुन्तै त्यो चमक फर्काउनेछ, यो धेरै सानो जस्तो देखिन्छ।
धेरै रेशमीपन प्रदान गर्दछ। हामी यसलाई विशेष गरी घुमाउरो कपालमा देख्नेछौं, जहाँ कर्लहरू धेरै नरम र अधिक चिन्हित हुनेछन्। यसले चम्किलो र रेशमी कपाल सिर्जना गर्नेछ, जहाँ यो पनि ध्यान दिइनेछ कि यसले धेरै सजिलैसँग विच्छेद गर्दछ।
सीधा उपचारको लागि केराटिन कसरी प्रयोग गर्ने
हामीले संकेत गरेका छौं कि यो एक्लै र विशेष रूपमा सीधा गर्नको लागि प्रयोग गरिने उत्पादन होइन, तर यो उपचार पनि गरिन्छ, असाधारण परिणामहरू दिँदै। आदर्श छ यो उपचार हेयरड्रेसरमा गर्नुहोस् र एक विशेष स्थान, किनभने परिणामहरू धेरै सटीक र दीर्घकालीन छन्।
यद्यपि त्यहाँ बजारमा उत्पादनहरू पनि छन् त्यसैले तपाईं घरमै किन्न र सीधा गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईंसँग विशेष केराटिन उत्पादन (फर्मल्डिहाइडमा नि:शुल्क) र केही कपाल स्ट्रेटनिङ आइरन हुनुपर्छ:
कपाल धोइनेछ र लगाइनेछ राम्रो शैम्पू र कंडीशनर, अधिमान्य हुन नुन बिना, र सम्पूर्ण टाउको र कपाल राम्ररी सफा गर्नुहोस्। त्यसपछि तौलियाले कपाल सुकाउनुहोस् र ब्लो ड्रायर प्रयोग गरी थप चिसो हटाउनुहोस् र ब्रश गर्दा यसलाई चिकनी बनाउनुहोस्।
कपाललाई स्ट्र्यान्डमा अलग गर्नुहोस् र जानुहोस् केराटिन लागू गर्दै कंघी र ब्रश को मद्दत संग। तपाईंले यसलाई हावा आवतजावत गर्ने ठाउँमा गर्नुपर्छ ताकि आँखा र छालामा जलन नहोस्। एप्लिकेसन जरादेखि छेउसम्म गरिनुपर्छ।
अब तपाईंले गर्नु पर्छ उत्पादन प्रभावकारी हुनको लागि पर्खनुहोस्, यो प्याकेज सम्मिलित निर्देशनहरूमा निर्भर हुनेछ। सामान्यतया, कपाललाई हावामा सुख्खा हुँदा उत्पादनलाई अवशोषित गर्न अनुमति दिनुपर्छ।
जब यो सुख्खा हुन्छ यो समय हो फलामको प्रयोग गर्नुहोस्। हामी कपालको प्रत्येक स्ट्र्यान्डलाई अलग गर्छौं र हामी जरादेखि छेउसम्म इस्त्री गर्नेछौं, हामी सानो चिमटीको साथ हामी के चिकनी गर्दैछौं भनेर सङ्कलन गर्न सक्छौं। यो पछाडि गर्न अलि जटिल हुन सक्छ, तर तपाईं मद्दत माग्न सक्नुहुन्छ।
उपचार पछि हेरचाह
उपचार प्रभावकारी हुनको लागि हेरचाहको एक श्रृंखला पूरा गर्न महत्त्वपूर्ण छ। आफ्नो कपाल भिजाउनु हुँदैन कम्तिमा तीन देखि चार दिन पछि, पसिना पनि प्रतिकूल छ।
जब तपाइँ यसलाई धुनु पर्छ तपाईले यसलाई धुनुपर्छ सल्फेट-रहित शैम्पू प्रयोग गर्नुहोस्, किनकि यस घटकले यसको प्रभावलाई प्रतिरोध गर्न र चमक हटाउन सक्छ। हरेक दिन आफ्नो कपाल न धुनुहोस्, आदर्श हप्तामा एक वा दुई पटक बीचमा हुनेछ। तपाइँ पछि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छaकेराटिन संग कन्डिसनर त्यो रेशमी, चम्किलो लुक राख्न।
यसलाई घाममा नदेखाउनुहोस् किनकि सौर्य किरणहरू हानिकारक छन्। बराबरी क्लोरीनबाट बच्न, विशेष गरी पौंडी पोखरीको पानीमा प्रयोग हुने। पनि लागू नगर्नुहोस् प्रयोग संग धेरै लगातार गर्मी ड्रायर वा आइरनहरू, वा आफ्नो हातले आफ्नो कपाललाई निरन्तर छुनुहोस् किनकि यसले सीधा गर्ने प्रभावलाई कम गर्न सक्छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: स्टाइलिश पुरुषहरू » व्यक्तिगत हेरचाह » केराटिन के हो र यो के को लागी हो?